China Silicone Straps orinasa sy mpanamboatra | SJJ
Ny fitaovana silicone dia tsy malefaka sy maharitra ihany, fa matanjaka sy tsara koa amin'ny fikojakojana sy ny fahalemem-panahy. Tady silika maro no ampiasaina amin'ny fiainantsika be dia be, toy ny fantsom-pifandraisan'ny telefaona silikona, fantsom-pandrefesana vita amin'ny silika, fehin-kiraron-tsoavaly, tarika silika sns. Ny tadiny silika dia matanjaka sy manify ...
Ny fitaovana silicone dia tsy malefaka sy maharitra ihany, fa matanjaka sy tsara koa amin'ny fikojakojana sy ny fahalemem-panahy. Tady silika maro no ampiasaina amin'ny fiainantsika be dia be, toy ny fantsom-pifandraisan'ny telefaona silikona, fantsom-pandrefesana vita amin'ny silika, fehin-kiraron-tsoavaly, tarika silika sns. Ny tadiny silika dia matanjaka sy manify, mitazona mafy ireo zavatra ireo amin'ny herin'ny elastika. Ireo sary famantarana dia azo soratana, na ambongadiny na aorina amin'ny endriny vita amin'ny silipo, ary azo atao amin'ny marika silika na PVC hafa avy eo mivory amin'ny tadin-tsolika mba hampisehoana ny hevitrao sy ny hevitrao. Ireo fehin-kibo vita amin'ny silika aza dia atambatra miaraka amin'ireo singa mamirapiratra na jiro manjelanjelatra mba hanintona sy manintona kokoa. Ny fitambarana dia mahatonga ny tadin'ny silika hiasa kokoa sy azo fidina amin'ny fampiroboroboana, orinasa, fanomezana, fety, fanatanjahan-tena, sekoly ary tanjona hafa.
Logos: Ny logo dia azo soratana, alefa na alefa amin'ny loko feno
Teo aloha: Winders tariby silikaly
Manaraka: Kopa vita amin'ny silika
Sina Factory tavoahangy tavoahangy Keychain Mercedes B ...
Bar filaharana / laharana miaramila / laharana miaramila / ...